UHaruki Murakami, umbhali waseJapan wenyani kunye nabathengisi abathengisayo | Uncwadi lwangoku
UHaruki Murakami ngumbhali waseJapan owaziwayo kwihlabathi namhlanje. Sithetha ngombhali othengisa kakhulu kwinqanaba elipheleleyo. Uludwe njenge-surrealist, nangona esebenze ngaphezulu kwesihlandlo esinye ngobunyani. Ukudityaniswa kweempawu zaseNtshona ezinempawu ze-idiosyncrasy yaseJapan yinxalenye yesitayile sakhe.
Ubulolo, ukudandatheka kunye nothando zezinye zeemixholo zakhe eziphindaphindayo. Iiyunivesithi zabo zisuka kwezona ndawo zicinezelayo- i-dystopias, ngokwemiqathango yoncwadi- ukuya kwi-oneirism ethembisayo. Ke, iye yamkelwa kunye amabhaso amaninzi Kuyo yonke indlela yokuhamba kwayo. Ngaphezu koko, abafundi bakhe abanomdla unyaka nonyaka bakhalaza ukuba akakabonakaliswa ngebhaso likaNobel loNcwadi.
1 Ukusuka eKyoto ukuya kwihlabathi
2 I-Nostalgia emsebenzini kaHaruki Murakami
2.1 Isampulu: Kafka kunxweme
3 Ngaphambi nasemva kweTokyo Blues
4 Umbhali oxinezelekileyo?
5 Uninzi lwabalandeli kunye nenani elilinganayo labazondayo
6 Akukho mntu ungumprofeti kwilizwe labo?
7 Eyona "Melika" yaseJapan
8 Inkosi yokuthengisa
9 Kutheni utshintsha nje?
Ukusuka eKyoto ukuya kwihlabathi
Wazalwa nge-12 kaJanuwari, 1949 eKyoto, wayehlala ixesha elininzi ebutsheni bakhe eKobe. Ngokuchanekileyo, ezi zixeko, kunye neTokyo, zezinye zeziganeko eziphindaphindwayo eziphononongwe nguMurakami ngabalinganiswa bakhe. Kuba uninzi lwamabali akhe ajikeleza ngokuchanekileyo malunga nesenzi: hlola.
Uthando lweeleta alifumana njengelifa ngqo kubazali bakhe; Bobabini babandakanyeka ekufundiseni uncwadi lwaseJapan. Ukwengeza, Kwasebutsheni waphenjelelwa kakhulu yinkcubeko yaseNtshona. Ukuza kuthi ga ngoku, umsebenzi wakhe ubandakanya iinoveli ezili-14, ingqokelela yamabali ama-5, amabali ama-5 abonisiweyo kunye nezincoko ezi-5.
I-Nostalgia emsebenzini kaHaruki Murakami
UMurakami ubhaptiza abafundi bakhe kwelona ziko lokungena nzulu. Isicatshulwa sakhe senziwe ngumxube olungileyo phakathi kwenyani kunye nefantasy., enongwe ngosizi olukhulu phantse kuwo onke amabali akhe. Ke ngoko, amabali akhe aqaqambe kakhulu, ahlawulisa ngokweemvakalelo kwisivakalisi ngasinye.
Isampulu: Kafka kunxweme
Ungayithenga le ncwadi apha: Kafka elunxwemeni
Ngeencwadi zikaMurakami, abafundi banamava abalinganiswa bakhe ngokungathi babesenyameni yabo. Kuzo, ngamanye amaxesha kunzima ukubona ukukhanya kwethemba phakathi kweengcinga ezininzi ezinamafu. Kafka elunxwemeni (2002) -mninzi owona msebenzi ubalaseleyo wombhali- uqokelela zonke iimpawu zokubaliswa ezichazwe apha ngasentla.
Abo banencwadi ezandleni zabo ayingobungqina bokuba kuthetha ntoni ukushiywa. Hayi. Kodwa baziva belahlekile kwihlabathi leentlanganiso kunye nokungaqondani nabalinganiswa abaluka, bengazi, yintlekele yomntu ophambili. Isakhiwo esiphindwe kabini ngobuchule esifakwe ngendlela enobukrelekrele nguMurakami asinikezi sivumelwano kuwo nawuphi na umgca.
Ubomi bukaKafka Tamura bulindele umfundi ngokungaqhelekanga kwisahluko ngasinye esinqabileyo, ngelixa ibali likaSatoru Nakata libalindile ngababini. Zonke ziqwalasele ngononophelo zada zahamba iindlela zazo, ngokungathintelekiyo, ziyafana.
Ngaphambi nasemva IiTokyo Blues
Ungayithenga le ncwadi apha: IiTokyo Blues
IiTokyo Blues (1986) ayisiyo inoveli yakhe yokuqala, nangona kunjalo, ukupapashwa kwayo kwavula iingcango zakwamanye amazwe. Imele isihloko sokumisela, esamvumela ukuba aziwe eJapan nakwindawo ezininzi zehlabathi. Ithengiswe kakuhle kangangokuba imali yasebukhosini yayanele ukuhlala nenkosikazi yakhe uYoko, okokuqala eYurophu emva koko eMelika.
Ngokuxakayo Umbhali ngokwakhe wakha wavuma ukuba xa wayibhala, umceli mngeni wakhe yayikukuba yinyani ngokupheleleyo. Imisebenzi yakhe yangaphambili-ipapashwe ngokutsha ngenxa yempumelelo yale ncwadi, ekwabizwa ngokuba yi Umthi waseNorway- kunye nokuninzi kokukhutshwa kwakhe okulandelayo, bathembekile ngakumbi kwi "classic Murakami style". Olu hlobo lwengxelo lunokuchazwa ngokuba "ziingcinga zamaphupha".
Ungumbhali osengqiqweni, kodwa akazilahli ezinye izinto ezinomdla. Vula I-Tokyo Blues, UMurakami ugxunyekwe kweyona nzulu inzulu. Ngokulinganayo, Ewe, umbhali uphonononga iimvakalelo ezinxulumene nokudakumba kunye netyala. Ukusetyenziswa kwegama lesiNgesi Blues kwisihloko, ayenziwa ngenxa yombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngapha koko, kungenxa "yosizi" yohlobo lomculo, lelo khokelo apho umbhali akhomba khona.
Uninzi lwabalandeli kunye nenani elilinganayo labazondayo
Iincwadi zakhe zigcina abagxeki kunye noluntu ngokubanzi lwahlulwe lwangamaqela amabini aphantse afane nobukhulu. Kulungile UHaruki Murakami ngomnye wabo bazobi bayathandana okanye bayathandana. Nangona kunjalo, bonke abagxeki boncwadi babonakala benesidingo esingenakuphikwa sokuvakalisa uluvo ngaye. Iyathandwa okanye hayi ... ayinamsebenzi, nokuba ufunde okuncinci okanye awufundanga kwikhathalogu yayo ebanzi.
"Ingxaki" (ukuqaqambisa amanqaku okucaphula) kubangelwa yimixholo ethile ekhoyo kwamanye amabali akhe. Kuzo, umda phakathi kwe-sublime kunye ne-cheesy awuphawulwanga "ngumgca obomvu obomvu". Ngokwenene yindawo enkulu epinki Ungcolisa konke okufikelela kuko.
Akukho mntu ungumprofeti kwilizwe labo?
Mhlawumbi apho inani lakhe lenza ezona ngxoxo ziseJapan. Amanye amazwi angafanelekanga amtyhola ngokuzibophelela ekuhombiseni umfanekiso wobuxoki welizwe lakhe, ngaphandle kokuphikisana neengcinga ezikhoyo ezikhoyo eNtshona. Ewe kunjalo, ukuqonda kweNtshona kuphela "kwezityebi" iYurophu (iNgilani, iJamani, iFrance) kunye neMelika.
Ngakolunye uhlangothi, ibuzwa kakhulu (phantse njengehlaya elibi) ukuba uthathwa njengoyena mntu ukhupha uncwadi lwaseJapan Kule minyaka ingamashumi idlulileyo. Ezi zimvo zingalunganga ziphawulwa sisixa esikhulu sezalathiso "zasentshona" ezikhoyo emsebenzini wakhe.
Eyona "Melika" yaseJapan
UMurakami akazange azifihle ukuncoma kwakhe umculo weAnglo-Saxon, ngakumbi The Beatles (yiyo loo nto esinye isihloko se- IiTokyo Blues). Nangona kunjalo, ukuxabisa kwakhe ukubonakalisa (ukubonakaliswa okuphindaphindiweyo) kwamaqela afana noDuran Duran kuyimpikiswano. Ngokufanayo, Impembelelo yeHollywood cinema ibonakala kumabali abo.
Okokugqibela, kwaye ushiye naziphi na izinto ezintle, UMurakami ngomnye wababhali owaziwa kakhulu ngendlela yokusebenzisa izibonelelo zentengiso yanamhlanje. Ukuphehlelelwa nganye okanye ukuqala kwakhona nasiphi na isicatshulwa ngokusayinwa kwakho kuqhelekile kwi-intanethi iiveki okanye iinyanga. Iziphumo zoqoqosho ziyamangalisa ngokwenene.
Kwanele ukugwetywa? Ngaba umbhali olungileyo akanakuba ngowona mthengisi ubalaseleyo? Ezi ntlobo zeengxoxo zihlala ziqhelekile kwezi ntsuku. Kule meko-nakwabanye, njengoPaulo Coelho, umzekelo-, pokanye amaxesha ukunqongophala kokuhanahanisa kuyaqondakala xa ucofa "irhanisi elibeka amaqanda egolide".
Kutheni utshintsha nje?
Yimigangatho yemidlalo kunye neshishini: iifomula zokuphumelela azitshintshwanga. Ubuncinci kungabi nje ukuba zihlala zisebenza kwaye zinenzuzo. Ekupheleni kosuku, abathandi zihlala zifanelekile kolu nxaki. U-Oscar Wilde sele eyitshilo: Eyona nto imbi kunokuthethwa ngayo ayithethwa ngayo. Iguqulela: eyona nto imbi kakhulu kunokuba uthethwe phantsi awuthethwanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli » UHaruki Murakami
UJoseph Sheridan Le Fanu. Isikhumbuzo esitsha sokuzalwa kwakhe